သင်သည်မည်သည့်အလုပ်လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်များကိုစတင်ခင်မှာ, သငျသညျအခြေခံအလုပ်အဆင်သင့်ကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်နိုင်ပါသည်. ဥပမာအားဖြင့်, သင်ဖတ်နဲ့ရေးသားဖို့သင်ယူချင်, ဒါမှမဟုတ်ကွန်ပျူတာကိုသုံးပါ, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးအလုပ်လျှောက်လွှာဖြည့်စွက်စေခြင်းငှါ.
المكتبات والمدارس والمراكز المجتمعية غالباً ما يكون لديها برامج تعلم هذه المهارات الأساسية. كذلك هناك جمعية خيرية تسمى النوايا الحسنة. သင်ချစ်ကြည်ရေးအသုံးပြုသောအဝတ်နှင့်အိမ်ထောင်စုပစ္စည်းများဝယ်နိုင်ရှိရာစတိုးဆိုင်မြင်ကြပြီစေခြင်းငှါ. လူတွေအလုပျအတှကျပွငျဆငျခွငျးနှငျ့အလုပျကိုကူညီရှာဖွေပေးဖို့ချစ်ကြည်ရေးစတိုးဆိုင်ကနေတပတ်ရစ်ပိုက်ဆံ. သူတို့ကအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနှင့်အခြားအခြေခံသင်ခန်းစာများကိုပေး. သင်လေ့လာသင်ယူနေချိန်တွင်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအတွက်ကကူညီစေခြင်းငှါ. ထိုကဲ့သို့သောဘဏ်များနှင့်ဆေးရုံများအတွက်အလုပ်အကိုင်အကျွမ်းကျင်မှုအဖြစ်အချို့နေရာများတွင်မှာတိကျတဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ချစ်ကြည်ရေးလေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်များ,.ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းနှင့်ထောက်ခံမှုများအတွက်ဒေသခံချစ်ကြည်ရေးရှာဖွေပါ
တိုင်းအသိုင်းအဝိုင်းကလူတွေအလုပ်ရှာဖွေရာတွင်ကူညီပေးမည့်တာဝန်ဘူတာရုံရှိပါတယ်. အမေရိကန်အလုပ်အကိုင်အစင်တာများကိုအမေရိကန်အစိုးရအနေဖြင့်အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကိုဖြစ်ကြသည်. အလုပ်အကိုင်စင်တာများနာမည်ကိုသုံးပါ “CareerOneStop” အင်တာနက်ကိုတွင်ဒါပေမယ့်လည်းသင့်ရဲ့ပြည်နယ်သို့မဟုတ်မြို့ဒေသခံတစ်ဦးအမည်အားရှိစေခြင်းငှါ. ဥပမာ, တက္ကဆက်ပြည်နယ်တာဝန်ဘူတာဟုခေါ်သည် “လုပ်သားအင်အား Solutions”. မင်နီဆိုတာခေါ်အလုပ်စင်တာများ “CareerForce”.
အလုပ်အကိုင်စင်တာများအလုပ်လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်များကိုမှလေ့ကျင့်ရေးသို့မဟုတ်လက်လှမ်း၏ပြဋ္ဌာန်းချက်များအပါအဝင်နည်းလမ်းများစွာ၌သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ. တချို့ကတာဝန်ဘူတာဒုက္ခသည်များနှင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများအတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့အထူးလေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်များရှိ! သငျသညျအနီးဆုံးအလုပ်စင်တာရှာဖွေပါ
အစီအစဉ် “ယောဘသည် Corps” ပညာရေးနှင့်လူငယ်များနှင့်အကြားအသက်ငယ်ရွယ်လူများအတွက်သက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းအခမဲ့အစီအစဉ်များကိုကမ်းလှမ်းတဲ့အစိုးရအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည် 16 နှင့် 24 ခုနှစ်. လေ့ကျင့်ရေးထိုကဲ့သို့သော CNA, ပါးစပ်တွင်းလက်ထောက်, ဆေးဆိုင်နည်းပညာရှင်, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာလက်ထောက်, ကနျြးမာရေးယူနစ်၏ညှိနှိုင်းရေးမှူးသူနာပြုအဖြစ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းဆောင်တာများပါဝင်သည်.ယောဘသည် Corps Learn
ရပ်ရွာကောလိပ်များအများအပြားကွဲပြားခြားနားသောသင်တန်းများအားလုံးအသက်အရွယ်မရွေးအရွယ်ရောက်သူတစ်ကျောင်းမှာပူဇော်နေသည်. သငျသညျအင်ဂျင်နီယာနှစ်နှစ်ညနပေိုငျးအတန်းထဲတွင်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားသင်ယူခြင်းကနေသင်တန်းပေးဖို့ဘာမှလုပျနိုငျ. ရပ်ရွာကောလိပ်များတော်တော်များများလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းများရှိ. ကျူရှင်ပုဂ္ဂလိကတက္ကသိုလ်များနှင့်ကောလိပ်များထက်အများကြီးလျော့နည်း. ကွန်မြူနတီကောလိပ်ကိုရှာပါ
အလုပ်သင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေစဉ်အတွင်းကျွမ်းကျင်မှုသိတော့သူတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါသင်တန်းသားအလုပ်အပေါ်လေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းနှင့်မကြာခဏစာသင်ခန်းထဲမှာတချို့သင်ခန်းစာတွေရှိနေကြသည်. သင်တစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်အလုပ်အတွက်စိတ်ဝင်စားမှုရှိပါကဤသူသည်သင်တို့အဘို့အကောင်းတစ်ဦးလမ်းကြောင်းကိုဖြစ်ပါသည် – ဥပမာအားဖြင့်, မော်တော်ကားပြုပြင်သို့မဟုတ်လျှပ်စစ်ဖြစ်လျက်ရှိ – သင်တို့မူကားသေးကျွမ်းကျင်မှုမရှိကြပါဘူး. CareerOneStop သင်သည်ထိုသူတို့အဘို့အရှာဖွေနိုင်သည်ကိုအလုပ်သင်များစာရင်းကိုရှိပါတယ်.သင့်ရဲ့ဧရိယာထဲမှာအလုပ်သင်ရှာဖွေပါ
ဤစာရင်းတွင်အလုပ်သင်၏ဖြစ်နိုင်ခြေသာအချို့လွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါ. هل هناك شركات بالقرب منك تبحث دائمًا عن العمال؟ يمكنك أن تسألهم إذا كانوا راغبين في أخذك كمتدرب وتدريبك. သင်ကျွမ်းကျင်မှုသင်ပေးနိုငျသောကွောငျ့မကြာခဏတစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချဝန်ထမ်းနဲ့ Hard အလုပ်မဆိုကျွမ်းကျင်မှုထက်အလုပ်ရှင်များကိုပိုမိုအရေးကြီးသောဖွစျလိမျ့မညျ.
အဓိကမြို့ကြီးများ၌၎င်း, ပင်အချို့သောအသေးစားလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအတွက်ကိုသင်အလုပ်အသစ်ရောက်ရှိလာသောလေ့ကျင့်ရေးကူညီသည့်အဖွဲ့အစည်းများတွေ့ပါလိမ့်မယ်. ဤသည်အေဂျင်စီကပြန်လည်နေရာချထားရေးသို့မဟုတ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းဖြစ်နိုင်သည်. ဒါဟာအချို့အလုပ်အကိုင်များအတွက်အသစ်ရောက်ရှိလာသောလေ့ကျင့်ရန်စီမံကိန်းကိုဖြစ်နိုင်သည်.
ဘော်စတွန်: နယူးအင်္ဂလန်၏အင်တာနေရှင်နယ်အင်စတီကျုက high-ဝယ်လိုအားဒေသများရှိအလုပ်သင်တန်းနှစ်ခုအစီအစဉ်များကိုကမ်းလှမ်း: ဧည့်ဝတ်ပြုခြင်းသင်တန်းအစီအစဉ်နှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုန်ဆောင်မှုများ၏အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်.
ဗဟိုတက္ကဆက်: မြို့တော် IDEA အရွယ်ရောက်ပြီးသူက high-ဝယ်လိုအားအလုပ်အကိုင်များအတွက်လေ့ကျင့်ရေးအတွက်ကူညီပေးသည်.
ကော်လိုရာဒို: ငှါး အမြိုးသမီးမြားရဲ့ Bean ကိုစီမံကိန်း ခြောက်သွေ့တဲ့အစားအစာထုတ်လုပ်မှုတွင်ပြည်သူ့အလုပ်လုပ်တဲ့နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကျွမ်းကျင်မှုရရှိမှုအနေဖြင့်.
မင်နီဆိုတာ: တိုးတက်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုအတွက် Communidades ယူနိုက်တက် Latinas (အနှစ်သာရ) အခမဲ့သင်တန်းများ9ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု, ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုဒေသများရှိအရွယ်ရောက်ပြီးသူအဘို့ရက်သတ္တပတ်.
ဒါ့အပြင်မင်နီဆိုတာပြည်နယ်အတွက်: မိတ်ဖက်အဘိဓါန် Hmong ကမ်းလှမ်း အမေရိကန်အလုပ်အကိုင်အလေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်များ မြင့်မားသောစက်မှုကျွမ်းကျင်မှုဝယ်လိုအားသင်ပေးဖို့.
မိန်း: နယူးအမေရိကန်ရေရှည်တည်တံ့သောစိုက်ပျိုးရေးစီမံကိန်း ဒါဟာလူတွေကိုလယ်သမားဖြစ်လာစေရန်ကူညီပေးသည်.
utah: အဆိုပါ Spice မီးဖိုချောင် အစားအစာကုန်သွယ်မှု၏လယ်ပြင်တွင်ရှေ့ဆောင်တွေဖြစ်ဒုက္ခသည်သင်တန်း.
ဝါရှင်တန်ပြည်နယ်: ဒုက္ခသည်သင်တန်းစီမံကိန်း နှင့်ဒုက္ခသည်များအစားအစာဝန်ဆောင်မှုစက်မှုလုပ်ငန်းရိုက်ထည့်ရန်.
ရှေ့ဆက်စဉ်းစားပါ – နည်းပညာ၏လယ်ပြင်တွင်တစ်ဦးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းကျင်းပ
وفقاً لمشروع ترميز اللاجئين ، هناك أكثر من نصف مليون وظيفة شاغرة في الولايات المتحدة الأمريكية! အတော်များများကမြို့ကြီးများသာအသစ်များကိုရောက်မှုများအတွက်ကွန်ပျူတာ-coded အစီအစဉ်များရှိ. ဤတွင်သူတို့ထဲကနှစ်ခုရှိပါတယ်:
သငျသညျပြီးသားကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှုရှိသည်သို့မဟုတ်သင်ယူလိုပါကလည်းအီလက်ထရောနစ်လုံခြုံရေးဟုခေါ်ဝေါ်သောကွန်ပျူတာနှင့်အင်တာနက်လုံခြုံရေးအပေါ်သင်တန်း, စဉ်းစားပါ. အဲဒီမှာအီလက်ထရောနစ်လုံခြုံရေးများ၏ကျွမ်းကျင်မှုရှိသည်သောလူတို့အဘို့အမြင့်ဆုံးဝယ်လိုအားဖြစ်ပြီး, အနာဂတျအတှကျကောငျးတဲ့အလုပ်ဖြစ်လိမ့်မည်.နည်းပညာအလုပ်အကိုင်အခွင့်အ Learn
လက်မှတ်ရရှိရန်, သင်ဖြစ်ကောင်းစမ်းသပ်သွားပါလိမ့်မယ်. ဒီတစ်ခါလည်းသင်စမ်းသပ်ခြင်းမပြုမီအချို့လေ့ကျင့်ရေးလိုအပ်ပါလိမ့်မည်.
သင်တို့အပေါ်မှာလိုအပ်တဲ့လက်မှတ်ရှာဖွေပါ CareerOneStop လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး Finder ကို.
အကူအညီ Upwardly ကမ္တာ့ အသစ်သောတွေဟာလည်းများအတွက်ပညာရှင်များအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌လက်မှတ်ရရှိရန်.